Cilmi-baadhis cilmiyeedku maaha qaabka kaliya ee wax-weydiinta ee ansax ku ah qiimaynta wanaagga ku-dhaqanka beeraha
Maqaalkan asal ahaan u muuqday ee daabacaadda Diseembar 2021 ee Majaladda Alliance waxaana lagu daabacay halkan iyadoo fasax buuxa ah.
Sannadkii 2006dii, Bettina Haussmann waxay baadhaysay taranta masago luul ah ee Niger. Iyada oo PhD ka qaadatay Jaamacadda Hohenheim ee Stuttgart, Jarmalka, waxay ahayd dhaqtar si gaar ah loo tababaray. Laakiin isla markiiba waxay ogaatay in waayo-aragnimadeeda aanay ka caawinin inay fahamto waxa beeralayda yar yar ee dalkan Galbeedka Afrika ku nool ay ka raadinayeen abuurkooda. Ma waxay doonayeen hadhuudh xilli goosasho dhaqameed? Mise nooc hore oo la isticmaali karo xilliga gaajada?
"Anigoo ku dhaqma Jarmalka, waxaa la ii tababari lahaa inaan aado wax-soo-saar sare, laakiin kuwa beeralayda yar yar, dhab ahaantii maaha oo kaliya wax-soo-saarka," ayuu yiri Haussmann oo hadda ah borofisar ku-xigeen ka ah Machadka Dhirta Dhirta ee Jaamacadda Hohenheim, Sayniska Seed , iyo hidda-wadaha dadweynaha iyo saynisyahan xidhiidhiye galbeedka Afrika ah oo la socda Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada (CCRP), kaas oo ah hindise ka socda Minneapolis McKnight Foundation. Dhab ahaantii, marka laga soo tago wax-soo-saarka, beeralayda Haussmann waxay iskaashi la sameeyaan waxay si aad ah u xiisaynayaan tayada nafaqada ee badarka, oo ah arrin muhiim ah markaad tixgeliso heerarka sare ee nafaqo-xumada ee gobolka.
Waa kuma khabiirku?
Xaqiijintaasi waxay xoojisay fikradda Haussmann ee doorkeeda khabiirnimo. "Markii [CCRP] ay ka bilaabatay Galbeedka Afrika, mid ka mid ah dadka beeralayda ah ayaa yiri "waxa naloo sameeyo oo dhan, laakiin anaga oo aan nagu lug lahayn, waxay noqon karaan kuwo naga soo horjeeda," ayay tiri. "Tani waxay naga dhigtay inaan isla markiiba ka fikirno bilawgii, inaanan samayn karin wax horumar ah iyada oo aan la shaqayn dadka dhabta ah ee ay khusayso ama ay saameeyeen isbeddelka la doonayo."
Isbeddelkan hal-abuurka ahi waxa uu wargelinayaa nidaamyada cuntada ee ka fikiraya adduunka oo dhan, laga bilaabo cilmi-baadhista, ilaa cidda aynu u tixgelinno 'khubaro', illaa iyo sida aan u fikirno oo aan u xaqiijinno caddaynta xallinaysa dhibaatooyinka dhabta ah ee xaaladaha dhabta ah.
"Ma rumaysni in macluumaadka ka imanaya sayniska uu yahay caddaynta kaliya ee loo baahan yahay si aan go'aannada u gaarno," ayuu yidhi Carlos Barahona, maamulaha maamulka Tirakoobka Horumarka Sustainable (Stats4SD), shirkad bulsho oo bixisa taageerada tirakoobka ee kormeerka. iyo qiimeynta waxqabadyada horumarinta, oo ay ku jiraan shaqada CCRP. Waxa uu sheegay in cilmi-baarista ay abuurtay hindisayaasha CCRP ee beero gaar ah ay tahay caddayn, iyada oo aan loo eegin in lagu qiimeeyay habab adag iyo in kale.
"Waxaan aaminsanahay labada natiijadood ee la cabbiri karo iyo natiijooyinka la arki karo oo lagu ilaalin karo siyaalo laga yaabo inaan wax lagu baran jaamacadaha." —JANE MALAND CADY, DIRECT BARNAAMIJKA DALKA
Sheekooyinka guusha waxaa ka mid ah ururinta ugu weyn ee noocyada quinoa ee ay hayaan machadyada cilmi-baarista maxalliga ah ee Bolivia. 'Taasi waa il gaar ah oo laga helo walxaha hidde-sidaha adduunka weligeed,' ayuu yidhi Barahona. "Suurtagal ma aha inaad qiimo lacageed duldhigto, laakiin waxaan ognahay in taas la sameeyo mooyaane, laga yaabo inaan lumino ilaha hidde-sideyaasha ee muhiimka ah." Sidoo kale, iskaashiga beeralayda maxalliga ah, machadyada cilmi-baarista iyo NGO-yada Peru ayaa ka shaqeynaya sidii loo ilaalin lahaa kala duwanaanta baradhada asalka ah ee Andes-ka sare. Beeralayda dumarka ah ee ku nool tuulooyinka galbeedka Afrika ayaa si guul leh u tijaabiyay oo ay doorteen iniinaha masago luul ah si ay uga gudbaan tarankooda si ay uga baxaan meelaha ay carradu ku yar tahay. Beeralayda yar yar ee bariga iyo koonfurta Afrika waxay tijaabiyeen waxtarka isticmaalka alaabta dhirta qalalan ee sunta cayayaanka.
CCRP, nidaamyo badan, natiijooyin badan, hab aragtiyo badan ayaa udub dhexaad u ah cilmi-baaristayada danta guud. Waxaan aaminsanahay labada natiijadood ee la qiyaasi karo iyo natiijada la arki karo laguna ilaalin karo siyaalo aan jaamacadaha wax looga baran. Malawi, beeralayda waxay qiimeeyaan dhaqamadooda asaliga ah ee wareejinta dalagga legume. Mashaariicdan, beeralayda laftoodu waa wada qiimeeyaal. Frank Tchuwa, oo ah la-hawlgalayaasha deeqda CCRP iyo macalinka horumarinta iyo fidinta miyiga ee Jaamacadda Lilongwe ee Beeraha & Kheyraadka Dabiiciga ah, ayaa leh: 'Dadku waxay bilaabaan ka doodista oo ay ka wada hadlaan haddii natiijooyinka la helay ay yihiin kuwo caadi ah, haddii cudur uu ku badan yahay tuulooyinka oo dhan, ama haddii gaar ah Ikhtiyaarka ayaa si isku mid ah loogu sameeyay tuulooyinka oo dhan, maxayse tahay sababta tuulooyinka qaarkood aysan u fiicneyn xilliyada gaarka ah? Iyo kuwo kale oo sidaas u wanaagsan? Markaa sababo kala duwan ayaa la bixiyaa, taasna, waxaan isku dayeynaa inaan dhisno gabagabada qaar.'
Mu'asasada McKnight waxay muddo dheer u heellan tahay jiilka soo socda ee hoggaamiyeyaasha. Habka iskaashiga iyo nidaamka ku jihaysan wuxuu horumariyaa cilmi-baarista iyo ku-dhaqanka labadaba wuxuuna si dabiici ah u ballaariyaa shabakadaha dhammaan ka qaybgalayaasha. Deeq-bixiyayaasha CCRP waxa ay aadeen meelo saamayn leh - caddayn dheeraad ah oo muujinaysa in habkan iskaashiga ahi uu shaqeeyo. Julio Kalazich, dhaqiyaha baradhada iyo deeq bixiyaha hore ee CCRP, wuxuu sii waday inuu noqdo agaasimaha Chile ee Machadka Qaranka ee Cilmi-baarista Beeraha (INIA). Robert Mwanga, oo u dhashay Uganda dhaqiyaha baradhada macaan iyo deeqda CCRP, waxa uu ka mid ahaa afar qof oo ku guulaystay Abaalmarinta Cunnada Adduunka ee 2016. Magali Garcia Cardenas, agronomist Bolivian ah oo iskaashi la leh beeralayda yar yar si loo ogaado cimilada iyo isbeddellada cimilada iyadoo la adeegsanayo hababka saadaalinta dhaqameed iyo sidoo kale saldhigyada cimilada ee Altiplano, waxay u adeegtaa Guddiga La-talinta Sayniska ee Sayniska Madax-bannaan ee Golaha Horumarinta.
Horey u socoshada, wada-hawlgalayaasha nidaamyada cuntada waxay u baahan doonaan inay horumariyaan nooca 'aqoon wadaaga wadaaga' ee uu ku sifeeyay botanist Robin Wall Kimmerer, qoraaga Braiding Sweetgrass: Xikmadda asaliga ah, aqoonta sayniska iyo waxbaridda dhirta. Kimmerer waxa uu qiyaasaa hab-abuur aqooneed oo loo qaabeeyey fikradda Beerta Saddexda Walaalo ah, kaas oo cilmi-baadhis cilmiyeed ku dhex-jiraan aragti-caalami ah oo asaliga ah: galleydu way koraan, digirtuna kor ayey u koraan galleyda, iyo basbaasku waxa uu ka kooban yahay haramaha ee xiriirka isku-dhafka ah. waa taageero oo wax soo saar leh. Ciyaartoyga kasta oo ku jira hababka cuntada ecology - beeralayda, saynisyahano, barnaamijyada fidinta, NGO-yada - waxay keeni doonaan xirfadahooda iyo xooggooda iyo waayo-aragnimadooda si ay u abuuraan xalalka ugu faa'iidada badan iyo kuwa cusub.